Jiri njem njem mee ezumike ya maka ya na Kildare
Ihe 20 kacha mma ime na Kildare
Ezinụlọ, di na nwunye, Ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anya, Ndị Na-achọ Adventure, Oge mbu, Ihe Ime
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Anyanwụ na -eme mkpọtụ na -achọgharị, site na ịgagharị n'oké ọhịa na -adọrọ adọrọ, ruo n'ụlọ nkwari akụ mara mma, anyị nwedịrị ụfọdụ klọb golf kacha mma na mba iji mee mgbagharị gị.
Kildare nwere ọtụtụ ihe ọ ga -enye, yabụ na ị gaghị etinye ole na ole n'ime ndụmọdụ anyị na listi ịwụ gị!
Ọzụzụ Irish National 2
A maara dị ka Thoroughbred County, Kildare bụ ebe obibi dị egwu Ọmụmụ Ihe Ọchịchị Irish. Ebe a na-azụ ịnyịnya na Tully bụ ebe ụfọdụ n'ime ịnyịnya kacha mma n'ụwa ma nweekwa ogige ndị Japan mara mma iji nyocha.
Ogige Mondello Ferrari
Na -achọ mkpali ọzọ na Kildare? Ogige Mondello Park a haziri gị!
A na -eme mmemme na -atọ ụtọ nke ịgba ụgbọ ala na ọgba tum tum na Mondello kwa afọ. Na mgbakwunye enwere ụlọ akwụkwọ ịnya ụgbọ ala ebe ndị mmadụ nwere ike nweta nkuzi na nkuzi. Kpọtụrụ sekit maka nkọwa.
Kildare Farm nri
Ihe oriri Kildarefarf
Nweta ndụ ime obodo Irish kacha mma n'efu, naanị nkeji ole na ole na mpụga obodo Kildare!
Kildare Farm nri na-enye ndị ọbịa ahụmịhe ugbo na-emepe emepe nke enyi na enyi, ebe ị ga-ahụ anụmanụ dị iche iche na-arụ ọrụ ugbo na ọnọdụ dị jụụ na izu ike na-akwụghị penny.
Ndị ọbịa ga -enwe ọmarịcha ikuku n'ime ime obodo, ma nwee ike mee nke ọma na nleta ha site na inye anụ ụlọ anyị nri ma ọ bụ ịnụ ụtọ nri dị ụtọ na Farm Café.
Debe obere ndị na -awụda gị ka ha na -enwe ezumike ezumike etiti a site na iji ụgbọ mmiri gbadara ọwa mmiri Kildare Njem Barge! Malite na Sallins, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ọdịnala nke Barge Trip na -aga n'ime ime obodo Kildare.
Ụmụaka nwere ike lekwasị anya maka anụ ọhịa n'akụkụ mmiri dị ka azụ azụ, dragonflies, ọbọgwụ, swans na ndị ọzọ. Ụmụntakịrị ga -anụ ụtọ otu ụbọchị na ikuku ọhụrụ, oge niile ha na -amụ maka akụkọ ọwa mmiri, ụgbọ mmiri na àkwà mmiri. Hapụ ụwa n'azụ wee malite njem njem na mmiri!
Ogige Ihe Nketa Lullymore 2
Ihe omuma ihe omuma & ihe nlere bụ ihe nlegharị anya otu ụbọchị nke dị n'agwaetiti ịnweta na Bog nke Allen na Rathangan County Kildare-ọnọdụ zuru oke maka ịgagharị ihe nketa Irish na gburugburu eke.
Lullymore Heritage & Discovery Park bụkwa ebe egwuregwu ezinụlọ nwere nnukwu egwuregwu egwuregwu mpaghara ụgbọ oloko na-eme nzuzu golf ebe egwuregwu ime ụlọ na-atọ ọchị na anụ ụlọ nwere ịnyịnya Falabella a ma ama-nnukwu ngwakọta na mmụta a na-eme Lullymore ka ọ bụrụ -hụ ”mgbe ị na -aga Kildare.
Miles na kilomita nke ịgagharị na anụ ọhịa - zuru oke ịfụ ọnyà oyi n'oge afọ niile! N'ịbụ nke dị na mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Kildare, Donadea Forest Park bụ hekta 243 nke osisi agwakọtara na ọ joyụ dị ọcha.
Ụgbọ elu na-agba ahịhịa, na-agagharị n'ubi ndị gbara mgbidi ma na-ajụkwa oyi n'ụlọ ice tupu ị na-enye ọbọgwụ na ọdọ mmiri hekta 2.3. Ndụ enweghị nchekasị na ya kacha mma. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na saịtị akpọrọ National Heritage saịtị Ebe a.
Ogige Ubi Clonfert 2
Anụmanụ na -amasị ụmụaka mgbe niile! Nakwa ndị enyi na -ewe iwe ọkụ, Clonfert nwekwara ebe egwuregwu egwuregwu abụọ dị n'èzí ma nwee nnukwu ụlọ, mpaghara egwuregwu ime, go-karts, bọọlụ bọọlụ, ọtụtụ ebe egwuregwu pịkụk na ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji mee ka ezinụlọ gị nwee obi ụtọ.
Kpọtara ụmụaka ahụ n'ugbo mepere emepe ebe ha nwere ike izute anụmanụ ma soro ndị ama ama bi, Rizzo, Sandy na Hector, alpacas a ma ama!
Obodo Kildare 11
Kildare nwere ya niile-ịnyịnya klaasị ụwa, nnukwu ụlọ ndị Irish oge ochie, yana, n'ezie, ọgwụgwọ azụmaahịa!
Obodo Kildare dị ihe na-erughị otu awa site na Dublin nwere ihe karịrị otu narị boutiques nke ụdị ejiji ụwa na ụdị ngwa ụlọ. Obodo Kildare na -enye ego ruru 100% na ọnụ ahịa azụmaahịa akwadoro ụbọchị asaa n'izu na afọ niile! Yabụ kedu ihe ị na -eche? Nweta ịzụ ahịa!
Ọ gaghị abụ njem njem na Kildare na -enweghị njem gaa na nnukwu ụlọ Irish oge ochie!
N'ime akụkọ ihe mere eme, e wuru Leixlip Castle na 1172 ma nwee ọtụtụ ihe ochie, arịa ụlọ, eserese na eserese na ụfọdụ ihe pụrụ iche dịka nnukwu ụlọ bebi nke narị afọ nke 18, na ndị ọzọ.
Nnukwu ụlọ a nwekwara ụlọ gothic griin haus, oche ụlọ nsọ, gazebo na ebe ọnụ ụzọ ámá.
Naanị obere oge na mpụga obodo Rathangan bụ otu n'ime ihe nzuzo kacha mma maka Ireland maka okike! Osisi Killinthomas dị na County Kildare dị ka ihe kwụ ọtọ site na akụkọ ifo na anyị nọ ebe a n'ime n'ime Kildare kwenyere na nke a bụ otu n'ime osisi ọhịa kacha maa mma na Ireland niile!
Mpaghara ihe dị ka acre 200 bụ ọhịa conifer siri ike nke nwere ahịhịa na ahịhịa dị iche iche. Enwere ihe dị ka kilomita iri nke ije ama ama ama na osisi maka ndị niile hụrụ n'anya na -eme njem, ndị a na -enye ohere maka ụdị gburugburu ebe obibi dị iche iche.
Biputere Keith Mahon kerịta - TheTaste.ie (@mrkeithmahon)
Kildare Maze bụ ihe onye ọ bụla kwesịrị ịhụ! Nnukwu ogige dị na Leinster na -enye ụbọchị ịma aka na -atọ ụtọ yana ezigbo ihe eji eme ochie maka ezinụlọ dị ọnụ ala. N'ọkụ ọhụrụ, nke a bụ nnukwu ebe ezinụlọ ga -enwekọ ọnụ otu ụbọchị!
E hiwere ogige mkpuchi na ngwụcha afọ 1990 wee mepee ọha na 2000. Kemgbe ahụ, ọ malitela mmemme mmepe dị ukwuu, na-agbakwunye nnukwu ihe nkiri ọhụrụ iji nye gị ụbọchị na-atọ ụtọ na nke na-atọ ụtọ karị.
Ebe a bụ maka ndị na -eme nchọpụta na obere ndị njem, otu ụbọchị onye ọ bụla ga -enwe ọ!
Chọọ wallabies, ikwiikwii na emus n'etiti ụzọ okike na oke ọhịa na -ejegharị ma ọ bụ na -anụ ụtọ anụmanụ na mpaghara mkparịta ụka mmekọrịta - niile tupu ị nweta achicha gị wee rie ya n'ụlọ ahịa kọfị.
Ụzọ Athgarvan, Newbridge
Newbridge ọla ọcha 9
Maka ihe karịrị 80 afọ Ngwongwo ọla ọcha Newbridge anọwo na -echepụta ma na -esepụta okpokoro dị mma na ụlọ nrụpụta ya na Newbridge, Co. Kildare Taa, ndị omenkà nke ọ bụla nwere ahụmịhe nke ndụ ya niile na -aga n'ihu na -eji okpokoro mara mma nke nwere otu nka na nlekọta ịhụnanya na mgbakwunye na ihe ịchọ mma na ihe onyinye.
Ụlọ ihe ngosi nka Style Icons nwere ohere ịbanye na nchịkọta ejiji na ihe nka nke bụbu nke ụfọdụ akara ngosi kachasị mma nke oge a dịka Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Princess Grace, Princess Diana, Beatles na ọtụtụ ndị ọzọ. Gaa njem nleta na ebe ndị ọbịa ileta ebe ngosi nka, jide nri ehihie wee chọgharịa ụfọdụ onyinye ụlọ ahịa pụrụ iche!
Gbanahụ ndị nkịtị na otu ụbọchị Ihe nkiri Redhills Kildare. Emebere Redhills Adventure na ihe bụbu ugbo ochie na -arụ ọrụ naanị kilomita ole na ole site na Kildare Village, na nso M7 na ihe na -erughị nkeji 35 site na gburugburu Red Cow. Na-enye ndị ọbịa ụbọchị emechiri emechi nke nwere ihe dị iche iche dị ka usoro, ihe egwuregwu na nchekwa. Ihe omume ha bụ ihe egwuregwu dị nro dị ala nke dabara maka ọkwa na mmasị niile.
Ha na-emeghe kwa afọ, Mọnde ruo Sọnde maka akwụkwọ otu maka mmadụ asatọ ma ọ bụ karịa, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike sonye na nnọkọ egwuregwu mkpado anyị na ngwụcha izu ọ bụla, yabụ na ị chọghị otu.
Ụlọ Castletown Parklands
Ụlọ Castletwown Parklands
Nwee anụrị maka ogige ntụrụndụ mara mma na Castletown. Enweghị ego nnabata iji jee ije ma legharịa anya na mpaghara ahụ. A na -anabata nkịta, mana ekwesịrị idobe ya na isi ma agaghị anabata ya n'ime ọdọ, ebe enwere anụ ọhịa.
Otu ụbọchị na agbụrụ
Naas Ọsọ 5
Nleta a na-akpọ Thoroughbred County agaghị ezu oke na-enweghị ụbọchị agbụrụ n'otu n'ime usoro ịgba ọsọ ọsọ ụwa ama ama. Ịgba ịnyịnya na Kildare adịla kemgbe ọtụtụ narị afọ, ebe ndị a na -anọchite anya nnukwu akụkụ nke DNA mpaghara. Ọmarịcha ụbọchị ịgba ọsọ juputara na ọdịnala, na -enye ndị ọbịa ụtọ ụtọ nke ọdịbendị pụrụ iche nke na ọ bụ ahụmịhe ị na -agaghị enweta ebe ọ bụla ọzọ. Mpaghara a bụ ebe nkuzi ọsọ atọ, Naas, Punchestown na The Curragh, nke ọ bụla na -enye oge nzukọ na ihe omume. Mee ga-eweta mmemme Punchestown kwa afọ, ụdị mmemme dị elu nke na ọ dị na ndepụta ịwụ onye ọ bụla.
Golf nke ụwa
K Kọnụ Palmer 7
Maka ndị hụrụ golf ọ bụla, nleta na Kildare agaghị ezu oke na -enweghị okirikiri (ma ọ bụ abụọ!) Na otu nkuzi nkuzi nke ụfọdụ ndị na -agba golf, nke gụnyere Arnold Palmer, Colin Montgomerie na Mark O'Meara.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na otu n'ime ebe egwuregwu golf kacha elu na Europe, K Club Hotel & Golf Resort nke nwere kpakpando ise nwere ụlọ golf abụọ mara mma nke nabatara ndị egwuregwu kacha mma site n'ọtụtụ asọmpi gụnyere iko Ryder na 2006.
Ebe obibi na -abụghị naanị otu egwuregwu golf abụọ, Carton House Golf bụ otu n'ime ebe egwuregwu golf ama ama na ama ama na Ireland. N'ịbụ nke dị n'ime acres 1,100 nke ogige ezumike nkeonwe, nkuzi ahụ na -erite uru site na nlele mara mma, oke ọhịa dị n'okirikiri na ndabere nke Palladian Manor House mere eme.
Site na nhọrọ nke ogige ma ọ bụ njikọ dị n'ime, enwere ihe dabara n'ụdị golf ọ bụla na Kildare. Debe oge tee ma hụ ya n'onwe gị.
Ọmarịcha Royal Canal Greenway bụ 130km nke akwa akwa akwa, dị mma maka ndị na -eje ije, ndị ọgba ọsọ na ndị na -agba ịnyịnya ígwè nke afọ na ọkwa niile. Malite na Maynooth nke ụwa, ọ na -eso ọwa mmiri dị afọ 200 site na Enfield mara mma na Mullingar na -adọrọ adọrọ na Cloondara na Longford, yana cafes, ebe egwuregwu na ihe nkiri na -eme n'okporo ụzọ. Okirikiri ala na ụlọ mmepụta ihe na -ejikọ, yana ubi na -agbagharị agbagharị, obodo nta mara mma n'akụkụ mmiri, mkpọchi na -arụ ọrụ na akara ngosi mere eme. Cycle ma ọ bụ jee n'etiti obodo ọ bụla ma jiri ụgbọ oloko laghachi ebe ị malitere. Soro ebe ụgbọ mmiri ịnyịnya na -adọkpụ mere njem ma lezienụ anya maka ihe ịtụnanya anụ ọhịa zoro n'ụzọ.
Akụkọ na -emeghị nke ahụmịhe Kildare VR
Akụkọ banyere Kildare 6
Ahụmịhe 3D dị omimi nke "Legends of Kildare" na -ebugharị ndị ọbịa n'oge iji chọpụta ihe nketa na akụkọ ifo nke Kildare oge ochie site na akụkọ St. Brigid na Fionn Mac Cumhaill.
Site na ntuziaka mgbe ochie nke dịnụ, ị nwere ike mụta akụkọ ihe mere eme nke saịtị Kildare nke gụnyere St. Brigid's Cathedral na Round Tower na ụlọ nsọ ọkụ oge ochie site na ezigbo eziokwu.
Njem a na -ewetara nka akụkọ akụkọ Irish n'ụdị ọhụrụ, na -ewere ihunanya, dike na ọdachi nke oge gara aga nke Kildare nke na -ada ụda na mkpọmkpọ ebe obibi anyị na katidral anyị. Njem a bụ mmeghe zuru oke na Kildare, na -eme ka agụụ na -agụ gị mgbe ị gara na saịtị ochie anyị n'onwe gị.
Ụlọ ihe nkiri Shackleton
N'ịbụ nke dị n'Ụlọ Ahịa nke narị afọ nke 18, Shackleton Museum na -eso ụzọ nke onye nchọpụta Antarctic a ma ama Sir Ernest Shackleton. Isi ihe ndị dị na ya gụnyere ihe mbụ na ngwa agha sitere na njem Antarctic ya na 15ft. ihe nlereanya nke ntachi obi nke ụgbọ mmiri Shackleton.
Ezinụlọdi na nwunyeNdị hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anyaNdị Na-achọ AdventureOge mbuIhe Ime